Madaxweynaha dalka oo isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka oo isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada
Hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa shaqada ka eryay wasiirkii cayaaraha, hidaha iyo dhaqanka Mr. Rashiid Echesa isagoo xilkaasi ku wareejiyay wasiiraddii waxbarashada Amina Maxamad.
Guddoomiyaha golaha qaran ee imtixaanada ee KNEC Prof. George Magoha ayaa loo soo xushay wasiirka wasaaradda tacliinta oo uu si rasmi ah ula wareegi doono kaddib marka uu baarlamaanka ansaxiyo.
Waxaa arrimahan shaaca looga qaaday amar madaxweyne oo maanta ka soo baxay madaxtooyada dalka looga arrimiyo ee State House.
Waxaa sido kale xilka qaadis lagu sameeyay Fatuma Xirsi oo ahayd xoghayaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda warfaafinta.
Isku shaandheynta madaxweynaha ayaa sido kale saameysay Ms Susan N. Mochache oo ahayd xoghayaha waaxda shirkadaha iyo iskaashiyada oo loo wareejiyay dhanka wasaaradda caafimaadka waxaana xilkeedii la wareegay Mr .Cali Nuur Ismaciil oo ahaa dhigeeda wasaaradda deegaanka.
Dr .Ibrahim Maxamuud Maxamad oo ahaa xoghayaha wasaaradda macdanta ayaa la geeyay wasaaradda deegaanka iyo keymaha .
Mr Peter Kiplagat Tum oo ahaa xoghayaha wasaaradda caafimaadka ayaa loo wareejiyay dhanka wasaaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada.
Dr Margaret Mwakima oo ahayd xoghayaha wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta ayaa loo weeciyay dhanka waaxda arrimaha jaaliyadda bariga Afrika ee EAC halka xilkeeda ay la wareegi doonto Dr Susan Koech .
Bayaanka uu madaxweynaha soo saaray ayaa sheegay in isbeddeladan ay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangalayaan.
Waxaa uu sido kale sheegay in isku shaandheyntan looga gol leeyahay in la sii wanaajiyo waxqabadka wasaaradaha dowladda gaar ahaan in laga dhabeeyo qorshayaasha ugu waweyn ee dowladda.
Qorshayaashan ayaa ka la ah helidda adeegyo caafimaad oo dhameystiran , wax soo saarka, guriyeynta iyo la tacaalidda cunno yarida.
Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray inuu isbedel sameeyay maadaama uu doonayo inay jirto daahfurnaan iyo islaxisaabtan.
Mr Rashiid Echesa oo ahaa wasiirkii cayaaraha ayaa noqonaya mas’uulkii ugu horeeyay ee xilkasi haya oo uu madaxweyne Kenya shaqada ka eryo.
Isku shaandheynta golaha wasiiradda ayaa imaanaysa iyadoo dowladda ay sare u sii qaadday dagaalka ka dhanka ah falalka musuqmaasuqa ee lagu lunsado kheyraadka dadweynaha loogu adeego.
Xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Alego Usonga ee ismaamulka Siaya Samuel Atando iyo dhigiisa Nyali ee maamul goboleedka Mombasa Maxamad Cali ayaa dhaliilay xilka loo magacaabay wasiiradda wasaaradda waxbarashada Amina Maxamad waxayna sheegeen in Kenyaanka ay madaxweynaha ka sugayeen isbedelo ka ballaaran inta uu sameeyay
Dhanka kale qaar ka mid ah shacabka maamul goboleedka Kakamega ee galbeedka dalka ayaa muujiyay sida ay uga xunyihiin xilka qaadista lagu sameeyay wasiirkii cayaaraha , hidaha iyo dhaqanka Rashid Echesa waxaana hadaladooda ka mid ahaa
← Madaxda ismaamulada xoola dhaqatada oo uu shir uga furmayo Garissa
In ka badan 600 oo ka mid ah sarakiisha wasaaradda dhulalka oo baaritaano lagu hayo →